Chofoza inkinobho ukuya esinyathelweni esilandelayo.
Ohlwini, ungakhetha eyodwa noma eziningi NTFS lapho ufuna ukuskena khona futhi uphinde uthole amafayela namafolda asusiwe, bese uchofoza inkinobho ye- inkinobho ukuya esinyathelweni esilandelayo.
bese uchofoze inkinobho ukuya esinyathelweni esilandelayo.
Uma konke kulungile, sicela uchofoze ifayela le- inkinobho eya ku-starinqubo yokuskena.
Ohlwini, ungakhetha ifayili elilodwa noma amaningi noma amafolda ofuna ukuwalulama, bese uchofoza inkinobho ye- inkinobho ukuya esinyathelweni esilandelayo. Ungahlunga noma uhlele uhlu ukuze ukwazi ukuthola ngokushesha okufunayo bese ukhetha.
Ngaphezu kwalokho, ungasetha ezinye izinketho zokutakula lapha. Ngemuva kwalokho, sicela uchofoze ifayela le- inkinobho ukuya esinyathelweni esilandelayo.
Uma konke kulungile, sicela uchofoze ifayela le- inkinobho eya ku-start inqubo yokutakula.